FAMONOANA MPIVAROTRA : Miaramila teo aloha voasambotra, zandary voaroaka karohina
Mivoatra hatrany ny vaovao mahakasika ilay fanafihana mitam-piadiana niseho ny alatsinainy 24 septambra teo akaikin’ny Ekar Fo Masin’i Jesoa Tanambao V Toamasina. 5 octobre 2018
Fanafihana mitam-basy izay namoizana ain’olona iray. Randriamanana Tsiriry Lorien Joël 39 taona avy any amin’ny Kaominina Betampona Fenoarivo-Atsinanana fa mila ravinahitra mivarotra ao Mahavelona-Foulpointe no voaroba sy namoy ny ainy tamin’izany. Vola 26 600 000 Ariary no najifan’ireo olon-dratsy.
Andro vitsy taorian’io, dia jiolahy miisa telo voalaza fa anisany nandray anjara tamin’ny fanafihana sy fandrobana an’io mpandraharaha io no voasambotra. Ekipan’i Dadalava ireto voasambotra ireto. Tsy nijanona teo ny fikarohana nataon’ny Kaomisaria Bazary Kely tarihin’ny Kaomisera Razafindahy Manitra Fleurys fa nitohy hatrany. Nisy mantsy ny fijoroana vavolombelona voarain’ny polisy fa anisany nandray anjara mivantana tamin’ iny fanafihana iny i Andrianarison Fabrice fantatry ny maro amin’ny anarana hoe Faby.
Ireo nanatri-maso ilay fanafihana nitranga izay sahy nijoro vavolombelona fa nahita an’i Fabrice teo ambony moto nisy ilay mpitifitra.
Natao ny fikarohana ka ny alaraobia 3 oktobra lasa teo, dia voasambotry ny polisy tao Andranomadio parisela 11/43 i Andria- narison Fabrice (Faby). Mbola tratra niaraka taminy ny moto marika RS miloko manga nampiasaina tamin’ny fanafihana ny andron’ny alatsinainy 24 septambra io.
Ny angom-baovao no nahalalana fa miaramila voaroaka i Faby. Voaroaka noho ny resaka halatra basy. Fantatra koa fa efa voarohirohy tamina raha-raha goavana izy io. Tafi-ditra ao anatin’izany ny raharaha fakana an-keriny. Ny fanadihadiana nataon’ ny mpanao gazety teny amin’ny faritra Bazary Be Toamasina iny, dia nanamarina ireo manodidina fa nahita io moto RS manga io koa tamin’ny fanafihana niseho ny talata 18 septambra teo amin’ilay kioska anoloan’ny biraon’ny Jirama. Efa fampiasan’i Faby amin’ny fanafihana maro araka izany io moto RS miloko manga io.
Zandary teo aloha karohina
Mifamatotra amin’io raharaha Tsiriry Lorien Joël io hatrany. Re izao fa zandary iray teo aloha koa no karohina. Io zandary io izay voaroaka noho ny raharaha maromaro mampisaringotra azy, anisan’izany ny raharaha fakana an-keriny sy halatra basy. Naman’i Faby io zandary voaroaka io, izay fantatra fa anisany nandray anjara mivantana tamin’ny fandrobana sy famoanana an’ilay mpivarotra avy ao Foulpointe ihany koa. Niasa tamin’ny kaoperativam-pitaterana iray tao Toamasina no re farany io zandary teo aloha io. Vantany vao naheno fa nafana ny fikarohana ireo tompon’ antoka tamin’ny fanafihana niseho ny 24 septambra, dia tsy hita popoka intsony ny tenany ka izao karohina fatratra izao. Mbola mitohy arak’izany ny fitadiavana an’ireo rehetra tompon’antoka tamin’ny famonoana an-dRandriamanana Tsiriry Lorien Joël.